Ndị otu Paxful: Zute ndị ọrụ ibe anyị
Ndị ọrụ Paxful bụ obi ụlọ ọrụ anyị, site na ọdịbendị na nzụlite dịgasị iche. anyị na amụta ihe mgbe niile site n'aka ibe anyị. Nke kachasị mma, onye ọ bụla nwere ike ịnwe asụsụ na ọdịbendị dị iche iche. Anyị nwere ike ịnwe ndị otu ngwaahịa raara onwe ha, mana platfọm anyị bụ nwunye nsonaazụ nke ọrụ mmekọrịta na nzaghachi sitere na ndị otu na ngalaba niile.
Ndụmọdụ ụlọ ọrụ (United States of America)
Kedu otu ihe ị na enweghị ike ịno otu ụbọchị na enweghị na Paxful?
Mụ na ndị ọrụ ibe m na egwu egwu.
Kedu ihe na akpali gị ebe a na Paxful?
Ikike. Ulọ ọrụ a nwere ikike dị ukwuu, amaara m na m nwere ike rụọ nnukwu ọrụ n'ịhụ na anyị ruru ihe ịga nke ọma ahụ
Kedu otu ihe gbasara ego Paxful / P2P nke ịchọrọ ka onye ọ bụla mara?
Ndị mmadụ na-ajụ ihe kpatara ego P2P ji dị mkpa. World Bank kwetara na ihe ruru mmadụ ijeri 2 anaghị enweta ọrụ ego ọdịnala. Paxful ńa enye ndị ahụ ohere itinye aka na usoro ego.
Onye isi na-ahụ maka Nkwenye (United States of America)
Mbanye na ike dị mma iji wetara ndị mmadụ Bitcoin.
Kedu ihe kachasị baa uru gbasara ọrụ gị?
Anọ m na ahụ maka ijide n'aka na anyị jidere ndị ọjọọ. Enyerela m ndị otu m ngwa ọrụ na usoro iji mee ya. Anyị enweghị ndidi maka igwu wayo na ọrụ rụrụ arụ na saịtị anyị.
Onye ngosi dijitalụ (Philippines)
Kedu uru kachasị mma ebe a na Paxful?
A hụrụ uru mgbatị ahụ na spa n'anya! Ulọ ọrụ ahụ na eche banyere ọdịmma nke ndị ọrụ ya na nke a na enyere gị aka izu ike n'oge na ụbọchị nsogbu kachasị.
Ọ ga amasị m ndị mmadụ ịmatakwu banyere ụlọ ọrụ n'ozuzu. Ulọ ọrụ ego P2P nwere ọtụtụ ihe ọ ga enye, ọkachasị ndị na enweghị ego.
Kedu ihe omume ụlọ ọrụ Paxful kachasị amasị gị nke ị gara ugbu a?
Ahịa Vidiyo (Philippines)
Ihe na eme m ka m gaa bụ ohere na-enweghị njedebe itolite ebe a. Ọbụna mgbe m dị obere, ha kwenyere na mu na ọrụ m. Ha nyere m ohere igosi ihe m nwere ike ime.
Oge ọ bụla anyị na apụ maka ịnụ mmanya, ọ bụ ihe na atọ m ụtọ na ụzọ dị mma maka m na ndị ọrụ ibe m ga!
Ọrụ m na enye m ohere ịgbanwe agụụ m na ọrụ nke na emetụta ndị na ele vidio anyị na eme.
Onye Nziaghachiozi Nyochaa Ogo (Philippines)
Ị na ahụ na ndị otu niile na ka mma, na arụ ọrụ kachasị mma na ọnụ ọchị na ihu anyị. Ibụ akụkụ nke usoro n'ahụ maka mmelite na akpali mmuo m na aga n'ihu ebe a na Paxful. Na n'ezie mgbe uru Bitcoin na-agbago!
Achọrọ m ka onye ọ bụla nwee ezigbo ihe ọmụma banyere otu Bitcoin si arụ ọrụ n'ozuzu ya na otu usoro azụmaahịa si arụ ọrụ na Paxful ka ha wee nwee ike ịghọta nke ọma karịa ma a na aghọgbu ha.
Kedu ihe ị ga - achọ ịhụ Paxful mezuru ma ọ bụ mee dịka ụlọ ọrụ na afọ ole na ole sochirinụ?
Ịghọ ụlọ ọrụ fintech nke mbụ na platfọmu azụmaahịa P2P!
Onye Mmepụta PHP (Estonia)
Nri mkpụrụ osisi na mkpụrụ aki na kichin, karịchaa.
Ndị mụ na ha na arụkọ ọrụ na ebumnuche ụlọ ọrụ na enyere ndị mmadụ aka ịnweta ọrụ ego ha na agaghị enwe ike.
Na enwere ezigbo ụzọ bara uru iji nweta ego na Paxful nakwa na ọ bụghị mmadụ niile bụ onye aghụghọ.
Kubernetes Injinia (Estonia)
Kọfị mu na ndị ọrụ ibe m. Ọ bụ oge dị mma iji nweta nzaghachi sitere na onye ọ bụla ma mụta ihe na-eme n'ime ngalaba ndị ọzọ. Mkparịta ụka na ezighi ezi nwere ike ịchekwa oge ejiri na nzukọ.
Ebe mgbatị ahụ, nri ehihie, ụbọchị ezumike. Otú ọ dị, isi ihe a na echefukarị bụ na Paxful bụ ụlọ ọrụ na-eguzosi ike n’ihe nke m rụworo ọrụ ná ndụ m. Ha na-eme ihe niile ha nwere ike ime iji mee ka ụbọchị gị dịkwuo mma ma mee ka ị nwee mmetụta dị mkpa
Ihe omume kachasị dị egwu bụ Oge Ezumike anyị, mgbe ụlọ ọrụ ahụ dum, gụnyere onye ọ bụla sitere na ọfịs ndị ọzọ, gbakọtara maka njem nwulite otu ụlọ na Split, Croatia. Ọ bụ ihe dị egwu izute ndị ọrụ ibe gị, ịmara onye ọ bụla, ma wulite mmụọ mmụọ otu.
Nkwenye (Hong Kong)
Nsonaazụ na ndị otu m
Na anyị na anwa ike anyị niile ichebe ndị na ere ere na ndị azụ ahịa! Ihe ikpeazu anyi choro bu ijide BTC gi.
Na efega na ụlọ ọrụ dị iche iche maka nleta na ọzụzụ
Onye njikwa Mgbakwunye (Estonia)
Ndị otu m!
Onwere ohere igbaputa dị egwu ma ndị oru ma ndị oru.
Mmemme Paxful niile na atọ ụtọ! Mana ọkachasị ụbọchị ezumike oge 2019, ebe anyị nọrọ izu zuru oke na Croatia.